Fanovana nomerika: Rehefa miara-miasa ireo CMO sy CIO dia samy mandresy | Martech Zone
Nanafaingana ny fanovana nomerika tamin'ny taona 2020 satria tsy maintsy. Ny areti-mandoza dia nahatonga ny protokolota lavitra ary ilaina ny fikarohana momba ny vokatra an-tserasera sy ny fividianana ny orinasa sy ny mpanjifa.
Ireo orinasa izay tsy mbola nanana fanatrehana nomerika matanjaka dia voatery namolavola haingana, ary nifindra ny mpitarika ny orinasa hanararaotra ny onjam-pifandraisana nomerika noforonina. Marina izany teo amin'ny habaka B2B sy B2C:
Ny areti-mandringana dia mety manana sori-dalana fanovana nomerika mandroso haingana hatramin'ny enin-taona.
Tatitra momba ny fironana nomerika Twilio COVID-19
Sampan-draharaha marketing maro no nahazo teti-bola, saingy ny fandaniana amin'ny vokatra martech dia mijanona ho matanjaka:
Manakaiky ny 70% no mikasa ny hampiakatra ny fandaniana martech ao anatin'ny 12 volana ho avy.
Fanadihadiana momba ny fandaniana CMO ho an'ny Gartner 2020 CMO
Raha tamin'ny vanim-potoana niomerika talohan'ny COVID-19 isika dia ao amin'ny vanim-potoana niomerika sy niomerika izao. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fiarahan'ny CMO sy ny CIO hifindra amin'ny taona 2021. Ny CMO sy ny CIO dia mila miara-miasa mba hanome traikefa ho an'ny mpanjifa tsara kokoa, hitondra ny fanavaozana ny martech amin'ny alàlan'ny fampidirana ary hanatsara ny fahombiazany.
Fiaraha-miasa hanomezana traikefa ho an'ny mpanjifa tsara kokoa
Ny CIO sy ny CMO dia tsy miara-miasa amin'ny famoahana matetika - alokaloka IT dia tena olana. Saingy samy mifantoka amin'ny mpanjifa avokoa ny mpitarika ny departemanta. Ny CIO dia mamorona fotodrafitrasa ampiasain'ny marketing sy ny lalam-barotra hafa hanatonana sy hanompoany ny mpanjifa amin'ny fomba mahomby sy mahomby. Ny CMO dia mampiasa fotodrafitrasa hamokarana mombamomba ny mpanjifa sy hanatanterahana fanentanana amin'ny marketing.
Raha miara-miasa amin'ny CIO ny CMO handray fanapahan-kevitra momba ny fanaparitahana martech sy ny fividianana vahaolana rahona, dia afaka manatsara ny traikefan'ny mpanjifa izy ireo amin'ny alàlan'ny angon-drakitra nohatsaraina sy ny fampidirana fampiharana, izay ho tombontsoan'ny tsirairay. Satria maro ny olona mampiditra orinasa amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana nomerika, ny filàn'ny orinasa handefa traikefa manokana sy manan-danja dia manakiana kokoa noho ny hatramin'izay, ary ny fiaraha-miasa CMO-CIO no lakileny.
Misy ihany koa ny singa ara-bola amin'ny raharaha mba hiarahan'ny CMO-CIO fiaraha-miasa lehibe kokoa.
44% amin'ireo orinasa mino ny fiaraha-miasa tsara kokoa eo amin'ny CMO sy ny CIO dia afaka mampitombo tombony.
Fanadihadiana momba ny infosys
Ny mpitarika ny departemanta marketing sy IT dia lohalaharana amin'ny revolisiona hyper-digital, ka ny fahombiazana eo amin'ny tontolon'ny post-pandemie dia miankina amin'ny fahafahan'izy ireo miara-miasa.
Fampidirana ho an'ny fanavaozana MarTech
CMO maro izay mazoto mividy vola hanohanana ny fanitarana dizitaly nitarina no manapa-kevitra ny tsy hifampidinika amin'ny CIO alohan'ny hanaovana fividianana teknolojia. Mety noho izy ireo manahy ny amin'ny fanemorana rehefa mila vahaolana teboka naparitaka haingana mba hamita ny fandraisana andraikitra. Na mety tsy mieritreritra izy ireo fa zava-dehibe ny mandrindra ary tsy mila hevitra faharoa momba ny safidy noraisiny.
Fa ny fijerena ny fidiran'ny CIO ho fitsabahan'ny ivelany dia hadisoana. Ny marina dia, CIO dia manam-pahaizana amin'ny fampidirana data, ny fahaiza-manao ilain'ny CMO rehefa mametraka vahaolana vaovao. CMOs dia afaka manomboka manorina fifandraisana tsara sy mamokatra amin'ny CIO amin'ny alàlan'ny fanatonana alohan'ny famaranana ny fividianana martech, ny fitsaboana ny consultation ho fiaraha-miasa.
Ny fampidirana dia mitarika ny dingana manaraka amin'ny fanavaozana ny martech, noho izany dia izao no fotoana mety hanamafisana ny fifandraisana CMO-CIO. Ny fampidirana ifotony asa maro ny vahaolana martech dia misy matetika tsy mahay mitantana fanaingoana mandroso kokoa, noho izany dia mila fahaiza-manao fampidirana izay mety tsy an-trano ny CMO, ary afaka manampy ny CIO.
Porofo manamarina: Ahoana ny fampiroboroboana angona ao anaty CRM ankehitriny
Ny ankamaroan'ny mpivarotra B2B dia efa manana porofo manamarina ny maha-zava-dehibe ny fampidirana data sy ny fahaizany manatsara ny fahombiazany ary mitondra ny fanavaozana. Ireo mpivarotra B2B izay nanampy ny CRM an'ny orinasan'izy ireo tamin'ny vahaolana vahaolana amin'ny marketing dia afaka mamorona tatitra amin'ny alàlan'ny angona azo itokisana amin'ny rehetra, manomboka amin'ny mpiara-miasa amin'ny fivarotana ka hatramin'ny filankevi-pitantanana sy ny tale jeneraly.
Ireo mpivarotra mampiasa fatra fandrefesana, manara-maso ary manara-maso dia mitarika ao anatin'ny CRM, afaka manatsara ny fahombiazany amin'ny alàlan'ny famantarana sy fanitsiana ireo olan'ny fizotrany. Ireo mpivarotra manana fitaovana hanondroana marina ny vola miditra amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny angona CRM dia afaka mampiasa vola amin'ny fomba mahomby kokoa amin'ny alàlan'ny fizarana hatrany ny dolara ho an'ny fampielezan-kevitra izay manome valiny tsara indrindra.
Miaraka amin'ny fanohanan'ny fampidirana avy amin'ny IT, CMOs dia afaka manara-maso ireo tetikasa hamokarana fiasa mahomby kokoa, ao anatin'izany ny automatisation sy ny fanavaozana ara-barotra entin'ny teknolojia. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny CIO, CMOs dia afaka mahazo ny fanohanana sy ny fahaiza-manao ilain'izy ireo hanamafisana ny fahafahan'ny automation.
CMO dia afaka mandray ny dingana voalohany
Raha vonona ny hanangana fifandraisana akaiky kokoa amin'ny CIO orinasanao ianao dia afaka mandray ny dingana voalohany amin'ny famoronana fahatsapana fiaraha-miory sy fahatokisana, toy ny fanombohanao fifandraisana ara-barotra hafa. Asao ny CIO hanana kafe sy chat tsy ara-potoana iray kaopy. Betsaka ny zavatra azo resahina satria mivoatra ary miha mandroso hatrany ny vahaolana martech.
Azonao atao ny miresaka momba ny fomba fiaraha-miasa hiasa hanatsara ny traikefan'ny mpanjifa, handroaka ny fanavaozana ary hanatsara ny fahombiazany. Azonao atao ny mizaha fantsom-piaraha-miasa vaovao, mifototra amin'ny fiaraha-miasa ho tombontsoan'ny orinasa sy ny mpanjifany izany. Rehefa miara-miasa ireo CMO sy CIO dia mandresy ny rehetra.
Tags: b2cizany diacmocmo ciofananganana dataFanovàna dizitalymetatra fandefasanagartnerfampidiranataratrafmmitarika fikarakaranadingana mitarikaautomation marketingMartechareti-mifindraTwilio
Fampiharana AI hananganana ny mombamomba ny fividianana tonga lafatra sy hanomezana traikefa manokana
Ahoana ny fomba hanombohana haingana ny fampielezan-kevitra miorina amin'ny toetrandro tsy misy fahaiza-manao amin'ny kaody